Uchungechunge lwe-670 Dragon® Dredge - i-Ellicott Dredges
I-Series 670 Dragon® dredge iyi- dredge ephathekayo yokudonsa ezingahanjiswa kalula futhi zihlanganiswe kusayithi ngomzamo omncane. Le dredge eguquguqukayo ilungele noma yimuphi umnikazi we-dredge wokuqala noma opharetha ofuna ukuthenga umkhumbi okulula ukuwusebenzisa. I-670 ijwayele ukusetshenziselwa amaphrojekthi asezingeni eliphakathi nendawo ezindaweni ezifana namachweba amancane, Imifula, kanye nephrojekthi yokudonswa kwamanzi ngaphakathi.
I-670 DREDGE ADVANTAGES
Kuthuthwa kalula ngaphezulu komgwaqo ngamaloli.
Ukutshalwa kwezimali kokuqala okuphansi ngokuthembela ekusetshenzisweni kwesikhathi eside.
Ilungele kahle abanikazi nabasebenza okokuqala ngqa — kulula ukuyiqeqesha nokusebenza.
Ukuzinza okungokwemvelo okuvumela ukusetshenziswa emanzini avikelwe kancane.
Usayizi Wokukhishwa: 14 ”x 14” (350 mm x 350 mm)
Injini ejwayelekile C-18: 715 HP (533 kW)
Izinhlobo ezimbili ongakhetha kuzo ngokususelwa ekujuleni kokudonswa okuphezulu okudingekayo: 33 '(10 m) noma 42' (12.8 m)
I-Lockable Engine Enclosure yokuphepha nokuncishiswa kwemisindo